Tag: barnaamijyada ganacsiga | Martech Zone
Tag: barnaamijyada ganacsiga
Horumarinta Codsiga waa warshad isdaba-joog ah oo isbedeleysa. Iyada oo ay sii kordhayaan ganacsiyada u tartamaya joogitaanka khadka tooska ah, ururada horumarinta barnaamijyada shaqooyinkooda ayaa u go'an iyaga. Waxaa si isdaba joog ah u kordhayay baahida loo qabo barnaamijyada abuuray suuq ay ku badan yihiin kuwa hadda jira. Intaas waxaa sii dheer, waa warshad ay la daalaa dhacayaan kororka iyo dalabaadka sii kordhaya. Taas ka sokow, barnaamijyada jira waxay u baahan yihiin dayactir joogto ah. Cilmi-baaristu waxay muujineysaa in 65% kheyraadka lagu kharash gareeyay isku dayidda jiritaanka